Mashruuca xalka ee – SOPU
Ka warran haddii aan qoyskayaga sharaftoodii dhaawacay? Qarsoodi wax ma u shukaansatay? Ma tagtay meelo lagaa mamnuucay in aad tagtid? Ma u lebbisatay si aan reerkiina rabitaankooda waafaqsanayn? Ma ku khasbanaatay in aad noqoto qof la xanto? Ma dareentaa soo jiidasho jinsiga aad isku midka tihiin?
Waxaa laga yaabaa in aad adigu dareentid, in aad qoyskiinii sharaftoodii dhaawacday. Waxa dhici karta in waalidkaa dareemaan in ay kugu hungoobeen adiga. Waxa dhacda in ay kugu adkaato in aad aragtiyahaaga iyo riyooyinkaaga kala hadasho waalidkaa, haddii ay yihiin kuwo aad uga duwan kuwa waalidkaa. La arkee in aad cabsootid, in adiga waalidkaa ku ciqaabaan. Sirta noocaan oo kale ah ma haboona in aad keligaa xambaaratid, ee waa in aad qof weyn oo aamin ah aad kala hadashid.
Waxaan adiga kaa caawinaynaa sidii aad xaaladdaas uga gudbi lahayd ! Sii akhriso bogga af-ka finlandiga, kula soo xidhiidh af-kaaga hooyo ( Hassen Hnini 040 1921095 ama af-ka finlandiga Johanna Aapakallio 040 1920815)
Ka warran haddii ilmahaygu uu dhaawacay sharaftii qoyskayaga?
La arkee in ilmahaagu sameeyey sida jaaliyaddiina u caadada ah si khilaafsan, adiguna aad dareemaysid, in ay meel kaga dhacday sharaftii qoyskiina. Mar mar baa la arkaa in ilmuhu sameeyo wax, waxaas oo naftiisa khatar gelinaya. Qoyskiina iyo jaaliyaddiinuba la arkee in ay u fekeraan, in la ciqaabo ilmaha, si loo soo celiyo sharaftii jaaliyadda, qoyskiinana uu culays soo fuulo arrinta daraadeed.
Hubaal ilmahaaga waad jeceshahay waxaadna rabtaa in aad siiso iyada / isaga mustaqbalka u wanaagsan ee suuragalka ah. La arkee in ilmahaagu sida qaalibka ah in uu rajaynaayo arrimo kale, marka loo eego wixii aad u qoondaysay oo wanaagga bidday. Waxaa dhacda in ay rabto in ay hiwaayad(harrastus) sporti ah yeelato, ay wakhti dhallinta kale la qaadato ama ay u guurto magaalo kale oo ay wax ka baranayso. Waxaad rabtaa in aad badbaadiso ilmahaaga, mana la rabtid in iyada ay wax xumi ku dhacaan. La arkee in aad cabsi ka qabto in ilmahaagu uu dayaco dhaqankaagii iyo bulshadaadaba ama in qoyskiina dhegtoodu xumaato bulshadiina dhexdooda.Shaqaalaha mashruuca SOPU waxay awoodaan in adiga iyo qoyskaagaba ay idin caawiyaan. Waxaan la xaajoonaa dhammaan xubnaha qoyska, waxaan hubsannaa in wixii dhacay oo dhan la gorfeeyo iyo in dhinac walba fursad la siiyo lagu dhegeysto. Wadajir baynu awoodnaa in aan ku helno xalka hawshan, intii aan talo fara ka bixin.
Sidii ilmahaagu si fiican u guulaysan lahaa Finland, ma ku filna in ay iskuulka keliya tagto. Waa wax fiican in ilmuhu yeesho wax hiwaayad ah (harrastus) ayna hesho saaxiibado da,deeda ah. Haddii mar walba ay guriga dhex joogto, way adag tahay in ay abuurto xidhiidh saaxiibeed. Saaxiibaddaha waxaa la isku bartaa is-aaminidda naftaada iyo tooda ba iyo weliba sida xaaladaha kala gedisan la yeelo, markii ay kula soo gudboonaadaan. Arrimahan barashadoodu waa mid socda inta uu qofku noolyahay, sidaas bayna ugu quman tahay in ilmuhu markuu yaryahay uu bilaabo tusaale ahaan hiwaayad wanaagsan. Waxa la arkaa in dhaqankaaga ilmaha jacaylka iyo daryeelka loo hayo loogu muujiyo in ilmaha wax walba loo qabto. La arkee in aad la yaabto, waayo bay carruurta finlandiyiintu iyagoo yar yar da, ahaan masuuliyad badan loo saaraa, ayna noqoto in ay si madaxbanaani leh u dhammaystaan arrimohooda. Waa mid haboon in la helo isu-dheelitir, kaas oo ilmaha lana daryeelayo, haddana uu ku tababaranayo sidii uu ilmuhu arrimihiisa ku dhammaysan lahaa madaxbanaani. Carruurta waa ay u wanaagsan tahay in ay xad leeyihiin, balse ay xadka gudihiisa ku dhaqdhaqaaqi karaan. Carruurta muhiim bay u tahay in ay u sii tababartaan go,aan gaadhista arrimaha noloshooda, si ay markay weynaadaan ay isu debberaan. Arrimahan iyo kuwo kale oo mawduuca waalidnimada la xidhiidha waxaanu kaga wada hadalnaa kooxaha aabayaasha iyo kuwa hooyooyinka. Gacmo furan ku soo dhowaada !
Halkan nagala soo xidhiidha:
Hawl-wadeenadda sare ee mashruuca